Sakaizan’i Januária · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 8:22 GMT
Januária, Minas Gerais, Brezila – Nanatevin-daharana ny Rising Voices tamin'ny taona 2011
Vao avy nisedra fahasahiranana tamin'ny fiadidiana (governemanta) tao an-toerana ny tanàna kely any Januária, avaratry ny fanjakana Breziliana ao Minas Gerais. Nifandimbiasana ben'ny tanàna miisa fito ity tanàna ity nandritra ny enina taona. Betsaka amin'ireo ben'ny tanàna ireo anefa no voaisotra tamin'ny asany noho ny fanitsakitsahan-dalàna, ary maro tamin'izany ny fitantanana tsy ara-dalàna ny volam-bahoaka. Noho ny fahalaviran'ity tanàna kely ahitana mponina 65 000 lavitra tanàndehibe ao Brezila ity, dia tsy misy na kely ny fanangonam-baovao ataon'ny gazety ao an-toerana, izay matetika fomba iray hitazomana ireo mpiasam-bahoaka hanao tamberin'andraikitra amin'ireo mpifidiny.
Nanomboka tamin'ny taona 2004, nisy fikambanana antsoina hoe Fikambanana Sakaizan'i Januária (Asajan) eny an-toerana nanao fanentanana ny vahoaka mikasika ny fitantanana ao an-toerana. Niezaka ho tompondakan'ny fangaraharahana sy ny tamberina andraikitra amin'ny fiadidiana an'i Januária ny Asajan tamin'ny alàlan'ny fanentanam-bahoaka sy ny asan-gazety fanadihadiana. Tontosa ny ankamaroan'ity asa lehibe ity noho i Fábio Oliva, iray amin'ireo mpanangana ny Asajan, bilaogera mavitrika, izay nanoratra ny olana ara-panolorantenan'ny olom-pirenena. Tamin'ny taona 2008, nanasongadina horonantsary fanadihadiana momba ny asan'ny Asajan sy ny zavatra ilain'ny fiaraha-monina ao an-toerana tamin'io fotoana io ireo mpanao gazety Breziliana marolafy Amanda Rossi sy Jamilla Venturini, ka nifantohana ny asan'ny Asajan amin'ny fihazonana an'ireo manampahefam-panjakana ho tompon'andraikitra (hanao tamberin'andraikitra).
Mikasa koa ny asajan hampandray anjara bebe kokoa ireo oona ao an-toerana amin'ny asany manaramaso ny fiadidiana monisipaly sy ny tetibolany ny Asajan, ary eo ihany koa ny fitadiavana lalana ahafahana miditra amin'ny torohay momba ny tanàna. Ny dingana voalohan'ny tetikasa dia notarihan'i Rossi sy Venturini, miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'i Oliva, Asajan ary ny hafa, tamin'ny fampandraisana andraikitra ny mponina ao an-tanàna, indrindra tamin'ny fifantohana tamin'ireo tanora, hampianatra azy ireo ny fomba fampiasana ny fitaovana media an'olom-pirenena hisian'ny fandraisan'izy ireo anjara bebe kokoa amin'ny raharaha maha-olompirenena. Namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaogy iombonana ireo mpandray anjara, amin'ny fampiasana lahatsary sy sy sary nomerika ho fomba handraketana ireo olana atrehin'ny tanàna sy hanaraha-maso izay hamalian'ny fiadiaiana eny an-toerana an'ireny filàna ireny.
Taorian'ny famaranana ny dingana voalohany, nanapa-kevitra ireo mpandray anjara tamin'ny fampiofanana mba hamahana ny bilaogy mifototra amin'ireo lesona noraisina tamin'ny fanombohana ny tetikasa tamin'ny taona 2011.
Jereo ao amin'ny tranonkala:
Tranonkalan-tetikasa: Amigos de Januária
Sary: Flickr RSS
Twitter: @Januariasfriend [en]
Twitter: @AmigodeJanuaria [pt]
Bilaogin-tetikasa: Friends of Januária RSS
Latest Feature Posts from the Friends of Januária project
22 Novambra 2013
Brazil: Citizen Journalism for Small Town Change
Amigos de Januária: Citizen Journalists Expose City's Unfinished Works
23 Novambra 2011
08 Oktobra 2011
Latest Posts from the Friends of Januária project Blog
01 Desambra 2012
Friends of Januária: A Year of Citizen Media
19 Septambra 2011
09 Septambra 2011